ဗြိတိန် ပညာတော်သင် တစ်ဦး၏ ဇနီးဖြစ်သူကို သူလျှိုလုပ်မှုဖြင့် ယူအေအီးက ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကွ?? - Yangon Media Group
ဗြိတိန် ပညာတော်သင် တစ်ဦး၏ ဇနီးဖြစ်သူကို သူလျှိုလုပ်မှုဖြင့် ယူအေအီးက ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကွ??
လန်ဒန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃
အာရပ်စော်ဘွားများနိုင်ငံ (ယူအေအီး)သည် ဗြိတိန်ပညာ တော်သင်တစ်ဦး၏ ဇနီးဖြစ်သူ အသက် ၃၁ နှစ်ရှိ မက်သယူး ပော့(ခ်ျ)အား နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်က သူလျှိုမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်တစ် သက်တစ်ကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ခဲ့ခြင်းအတွက် ယူအေအီး နိုင်ငံအပေါ် ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သည်ဟု ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးရုံးမှ အတွင်းဝန်ဖြစ်သူ ဂျယ် ရယ်မီဟန့်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်ဟု နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် သတင်းများအရသိရှိရသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ယူအေအီးနိုင်ငံအား အရှေ့အလယ်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး လက်နက်များထောက်ပံ့ပေးထားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
ရေနံကြယ်ဝသော ပင်လယ် ကွေ့နိုင်ငံဖြစ်သော ယူအေအီးက သူမသည် သမ္မတရုံးအထိအဆင့်ဆင့် အယူခံဝင်နိုင်ကြောင်းထုတ် ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ သို့သော် ဒူဘိုင်းအစိုးရသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံရေးအရထိုးနှက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု ဂျယ်ရယ်မီဟန့်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပော့(ခ်ျ)သည် မေလ ၅ ရက်က ဒူဘိုင်းလေဆိပ်တွင် အဖမ်းခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ဖြစ်သည်။ ပော့(ခ်ျ) သည် ယူအေအီးနိုင်ငံ၏ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အာရပ်နွေဦးတော်လှန်ရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ယူအေအီးနိုင်ငံ ခြားရေးရုံးနှင့် ပြည်တွင်းထောက် လှမ်းရေးအဖွဲ့များအပေါ် ထိုး ဖောက်ဝင်ရောက်၍ သတင်းရယူ ခြင်း။ စုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းများ ပြုခဲ့သည်ဟု ဒူဘိုင်းအစိုးရအရာ ရှိများက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ ကာလကြာရှည်စွာ လိုလားတောင့်တနေသည့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး??
ဆော်ဒီအာရေဗီးယား အိမ်ရှေ့မင်းသား လူသတ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟူသော စီအိုင်အေ အစီရင်ခံစာကို သမ္မတထရန
ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်တွင် ခင်ပွန်းက ဇနီးနှင့် ကလေးနှစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်ကာ အလောင်းစွန့်ပစ်